काठमाडौं– भ्रष्टाचारको आरोप पुष्टि भएपछि गत जेठ ११ गते नेपाली सेनाका प्रमुख सेनानी केशवराज कार्की बर्खास्तगीमा परे ।
कालीसिद्धी गण उदयरपुरको प्रमुख रहेका बेला उनले गणको आन्तरिक हिसाबकिताब र राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण कार्यक्रमको रकम हिनामिना गरेको ठहर भएपछि जनरल सैनिक अदालतले अनियमितता गरेको रकम फिर्ता गराउन र ३ महिना कैद तथा बर्खास्तगीको आदेश दिएको थियो ।
सेनानी कार्कीले गण र राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण कार्यक्रमको ४९ लाख २९ हजार ८ सय ८९ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर अदालतले गरेको थियो ।
सेनाभित्रका यस्ता कुराहरू प्रायः बाहिर आउँदैनन्, त्यसैले पनि आमनागरिकमा सेनाबारे बढी चासो पाइन्छ ।
नेपाली सेनाभित्र के कस्ता भ्रष्टचार हुन्छन् ? कानूनविपरीत काम गर्नेलाई कस्तो कारवाही हुन्छ ? लगायतका प्रश्न सर्वसाधारणले गर्ने गर्छन् ।
सेनामा गल्ती गर्नेलाई कारवाही गर्ने आफ्नै विधान छ र अदालत पनि ।
सैनिक अदालतका फैसलाहरू अन्य अदालतको जस्तो धेरै चर्चामा भने आउँदैनन् ।
४ सय १२ जना कारवाहीमा
सैनिक जङ्गी अड्डाको तथ्यांक हेर्ने हो भने २०७१ साल वैशाख १ गतेदेखि २०७६ साल जेष्ठ २० गतेसम्म अर्थात् पछिल्लो ४ वर्षको अवधिमा ४ सय १२ जना कारवाहीमा परेका छन् ।
एकजना अधिकृत र ५५ जना अन्य दर्जाका सैनिक कर्मचारी गरी ५६ जनाको घटुवा भएको जङ्गी अड्डाले जनाएको छ ।
यस्तै ६ जना सैनिक अधिकृत र ३ सय ४० जना अन्य दर्जाका सैनिक गरी ३ सय ४६ सैनिक कर्मचारीलाई भविष्यमा अयोग्य नठहरिने गरी बर्खास्त गरिएको छ ।
१० जनालाई भने भविष्यमा अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गरेको सेनाका साहयक रथी विज्ञानदेव पाण्डेले बताए ।
पूर्णचन्द्र आएपछि २ सय सैनिक कारवाहीमा
वर्तमान प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले कार्यभार सम्हालेपछि मात्र २ सय ४ जनामाथि कारवाही भएको छ ।
गत वर्षको भदौ २४ गते पदबाहली गरेपछि गत जेठ २० गतेसम्मको तथ्यांक केलाउँदा २ सय ४ जनामाथि कारवाही भएको देखिन्छ । एकजना सैनिक अधिकृत र २८ जना अन्य दर्जाका सैनिक कर्मचारीलाई विभागीय कारवाही गरिएको छ ।
४ जना सैनिक अधिकृत र १ सय ६५ जना सैनिक कर्मचारी भविष्यमा अयोग्य नठहरिने गरी बर्खास्तगीमा परेका छन्, भने ६ जना सैनिक कर्मचारी भविष्यमा अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त भएको सैनिक जङ्गी अड्डाले जनाएको छ ।
कारवाहीले सैनिकमा सकरात्मक प्रभाव !
कानूनविपरीत काम गरेका सैनिक कर्मचारीहरूलाई कारवाही गर्दा नेपाली सेनामा सकरात्मक प्रभाव परेको सेना प्रवक्ता सहयक रथी विज्ञानदेव पाण्डे बताउँछन् ।
‘कारवाहीले सैनिकको मनोबललाई सकरात्मक असर पारेको देखिन्छ । पदको दुरुपयोग गरेर अतिरिक्त सुविधा लिनेहरू कारवाहिको दायरामा आउने भए,’ उनले भने, ‘संगठनात्मक सुधारमा सेनाको एउटा पद्धति छ, त्यसलाई मद्दत पुग्छ ।’
नौजवान सेनाका कर्मचारीहरूलाई यस्ता कारवाहीले मनोबल उच्च राख्न र नराम्रो काम गर्नेलाई निरुत्सान गर्न सहयोग गर्ने सहायक पाण्डेले बताए ।
‘गलत गर्नेलाई सह्यो भने अरूले पनि गलत गर्छन्, यदि गलत गर्नेलाई कारवाही गर्ने हो अरू पनि गलत गर्न डराउँछन्, त्यसकारण पनि सेनामा हुने कारवाहीले सकरात्मक प्रभाव पार्छ’, पूर्व उपरथी बलानन्द शर्मा भन्छन् ।
उनले थपे, ‘मानिस स्वभावैले अल्छी हुन्छ, त्यसकारण उसलाई जुझारू बनाउन कारवाही जरुरी छ ।’
त्यो रिट जसले देशभरका जनप्रतिनिधिले ‘चोर'बाटोबाट खाइरहेको तलब खोस्यो [पूर्णपाठसहित]